Xaaladdeenna Mesoamerican iyo guud ahaan kuleylaha adduunka, Dengue waa cudur caadi ah bilaha xilli-roobaadka. Ogaanshaha meesha tirada ugu badan ee dhacdooyinka ay ka dhacaan hubaal waa layli ay codsiyada GIS ku bixiyaan natiijooyin qiimo leh. Waxaan xasuustaa markii aan yaraa, dengue ma ahayn ...
Abuureyaasha moodeelka 'SuperGIS' waxaan kaheleynaa warar qaar oo mudan in la badbaadiyo.Fujairah Hawlaha Guud iyo Waaxyaha Beeraha Waxay hagaajinayaan joogtaynta kaabayaasha dhaqaalaha iyadoo SuperGISFujairah ay tahay mid kamid ah Imaaraatka Carabta, Bariga Dhexe. Waxay go'aansadeen inay hirgeliyaan tikniyoolajiyadda SuperGIS ee maaraynta meertada nolosha ee kaabayaasha, ...
tabo cusub, SuperGIS
SuperSurv waa aalad si gaar ah loogu sameeyay GPS-ka ku shaqeeya Android-ka, iyada oo ah codsi isku-darka howlaha GIS kaas oo xogta lagu qaban karo berrinka si hufan iyo dhaqaale ahaanba. GPS-ka ku jira Android Noocii ugu dambeeyay, SuperSurv 3 wuxuu mobilka u rogaa ururiyaha, oo leh juquraafi, muujinta khariidada, la-talin, cabir iyo kormeer ...
GPS / Qalabka, aragti ugu horeysay, SuperGIS
SuperGIS, aragti hore
Marka loo eego duruufahayaga galbeedka SuperGIS ma aysan gaarin jago muhiim ah, sikastaba ha noqotee Bariga, kahadalka wadamada sida Hindiya, Shiinaha, Taiwan, Singapoore -oo dhowr ah magacooda- SuperGIS waxay leedahay boos xiiso leh. Waxaan qorsheeyay inaan tijaabiyo qalabkan inta lagu gudajiray 2013 sidii aan ku sameeyay gvSIG iyo Manifold GIS; isbarbardhiga shaqadiisa; hadda…
Geospatial - GIS, aragti ugu horeysay, SuperGIS